တရုတ်ကို LED စက်ရုံအလင်းများ, LED မီး Aquarium အလင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း, အလင်းတိုးတက်ကြီးပွား LED
PH သည် COB စီးရီး
LED ကို Aquarium အလင်း
အပြည့်အဝ Specturm 200 * 10W အလင်း Project မှတိုးတက်ကြီးပွား LED
COB 2000W အလင်းအပြည့်အဝ Spectrum တိုးတက်ကြီးပွား LED
Phlizon အပေါ် Customer များပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များအလင်းတိုးတက်ကြီးပွား LED
 လျ：86-755-23722726 အီးမေးလ်ပို့ရန်：amy@phlizon.net
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company , Service
ဖေါ်ပြချက်:အလင်းတိုးတက်ကြီးပွား LED,LED စက်ရုံအလင်းများတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း ရာပူဇော်သက္ကာကို LED ကို Aquarium အလင်း ထုတ်လုပ်သူ / ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, စသည်တို့ကို
PH သည် COB စီးရီး >
PH ကိုဘားစီးရီး >
LED ကို Aquarium အလင်း >
ငါးမွေးကန် Led အလင်း
Led ငါး Tank အလင်းများ
အပင်များအတွက် Led Aquarium အလင်း
Remote နှင့်အတူဦးဆောင်ငါး Tank အလင်းများ
Timer အတူ Led Aquarium အလင်း
အလင်းဘားမြှောင် Hydroponic မိုးလုံလေလုံတိုးတက်ကြီးပွား LED အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
SMD5630 Samsung ကအလင်းအရက်ဆိုင်ကြီးထွား LED အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Phlizon အပြည့်အဝ Spectrum အလင်းဘားတိုးတက်ကြီးပွား LED အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
wifi Control Adjustments Spectrum ဘားတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Phlizon 450W COB အလင်းတိုးတက်ကြီးပွား LED အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အပြည့်အဝ Spectrum COB ခရီးအလင်းများတိုးတက်ကြီးပွားဦးဆောင်ပြီး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အကောင်းဆုံး COB ခရီး Led အလင်း 250W တိုးတက်ကြီးပွားခြင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2019 က New Technology မှ COB Led အလင်းတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
LED COB ခရီး CXB3590 အလင်းတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ခရီး CXB3590 COB အလင်းအပြည့်အဝ Spectrum တိုးတက်ကြီးပွား LED အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
COB CXB3590 အလင်း 50w MeanWell ကားမောင်းသူတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Phlizon Cxb3590 100W COB အလင်းတိုးတက်ကြီးပွားဦးဆောင်ပြီး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Led ဟော်ရီကာချာအပြည့်အဝ Spectrum ဘားတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
800W အလင်းအရက်ဆိုင်တိုးတက်ကြီးပွားဦးဆောင်ပြီး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အပြည့်အဝ Spectrum အကောင်းဆုံး COB အလင်းတိုးတက်ကြီးပွားဦးဆောင်ပြီး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်ရုံစျေးဖန်လုံအိမ်အပင် Lamps တိုးတက်ကြီးပွားဦးဆောင်ပြီး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Phlizon အလွန်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အတူဖောက်သည်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်တာရှည်ခံအလင်းရောင်ထုတ်ကုန်များကိုဆက်ကပ်အပ်နှံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အဓိကအားဖြင့်ကြီးထွား LED မီးလုံးအာရုံစိုက်နှင့်ငါးမွေးကန်အလင်းဦးဆောင်ခဲ့သည်။ hydroponics ထုတ်လုပ်ရန်အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပစ္စည်းများအလင်းနှင့်အဏ္ဏဝါငါးမွေးကန်ထိုကဲ့သို့သောအော်တို Smt စက်, reflow ဂဟေစက်, လျှပ်စစ်စမ်းသပ်ကိရိယာများအမျိုးမျိုးတို့ကို, ကြီးမားတဲ့ပေါင်းစပ်နယ်ပယ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအမြိုးမြိုးအဖြစ်ထိုင်ဝမ်, ဂျပန်, ကိုရီးယားနှင့် United States မှတင်သွင်းအလင်းကရိယာ, ဦးဆောင်ကြီးထွားဦးဆောင် ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ R & D ကိုပစ္စည်းကိရိယာများ၏။
Phlizon ကြီးထွားအောင်အတွက်မြင့်မားတဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုဥရောပနှင့်အမေရိကတိုက်တစ်လျှောက်လုံးအလင်းလယ်ကွင်းဦးဆောင်တဲ့ဆီမီးခွက်နဲ့ငါးမွေးကန်ကိုဦးဆောင်ရခြင်းကိုနှစ်သက်သူ, Phlizon ကိုလည်းနောက်ဆုံးပေါ် & အကောင်းဆုံးစျေးကွက်တောင်းဆိုမှုကိုအဖြစ်အမြဲတစေအလင်းနှင့်ငါးမွေးကန်အလင်းကြီးထွားဦးဆောင်ဒီဇိုင်းမြင့်မားတဲ့နည်းပညာကိုယူပြီးအပေါ်အလေးအနက်ဆိုသည်။ ထက် ပို. လူ 10 နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ R & D အဖွဲ့သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hydroponics အပြည့်အဝရောင်စဉ်အများစုဟာအလင်းရောင်နှင့်ပင်လယ်သန္တာကျောက်တန်းကြီးထွားဦးဆောင်စသည်တို့ကိုအသွင်အပြင်ဒီဇိုင်း, အီလက်ထရောနစ်ဖွဲ့စည်းပုံ, အပူလွန်ကျူးခြင်း simulation ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, optical မှန်ဘီလူးဒီဇိုင်း, အလင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံကိုရှိပါတယ်ငါးမွေးကန်အလင်းရောင်ဦးဆောင်ပုဂ္ဂလိကများမှာ module တွေ, ငါတို့ယခုတိုင်အောင် 10 ထက်ပိုသောဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်များနှင့် utility ကိုမော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
Phlizon အလင်းအိမ်ကသဘာဝအလင်းမှဖြည့်စွက်အဘို့ဒီဇိုင်း, ဒါမှမဟုတ်ကြီးထွားအလင်းအိမ်တခြားအမျိုးအစားများနှင့်အတူတွဲ, မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပကြီးထွားလာရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းကြီးထွား LED ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏စိတ်ကြိုက်စက်ရုံကြီးထွားလာလိုအပ်ချက်များနှင့်စီမံကိန်းများအတွက်ကူညီဖို့ရန်အလွန်ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်။
အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အလင်းအိမ်အီးရှောက် သွား. ROHS, FCC သည်နှင့် ETL လက်မှတ်, မှတပါး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Power ကထောက်ပံ့ရေး, ပရိသတ်များနှင့်ဝါယာကြိုးအားလုံးမီးသတ်ယဉ်ပစ္စည်းဖြစ်ကြသည်မီးဖမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
နောက်ဆုံးပေါ် Samsung ကအပြည့်အဝ Spectrum Led ဘားအလင်းတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအပင်ကြီးထွားမှုများအတွက်အလင်းဘားတိုးတက်ကြီးပွား LED အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ခရီး COB Chips အပြည့်အဝ Spectrum အလင်းများတိုးတက်ကြီးပွား LED အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
dual VEG နှင့် Bloom မီးအိမ်တိုးတက်ကြီးပွား LED ကိုပြောင်းရွေ့ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
COB Hydroponics စနစ် Flower များအတွက်အလင်းတိုးတက်ကြီးပွားဦးဆောင်ပြီး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မိုးလုံလေလုံအပြည့်အဝ Spectrum ရင်ပြင်အလင်းများတိုးတက်ကြီးပွား LED အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Samsung က 240pcs အယ်လ်အီးဒီ 640W အလင်းဘားတိုးတက်ကြီးပွား LED အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလင်းများ 250watt 450watt 630watt ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအပင်များတိုးတက်ကြီးပွား LED အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အပြည့်အဝ Spectrum 300W ခရီး COB အလင်းတိုးတက်ကြီးပွား LED အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hydroponics 300W ဖန်လုံအိမ်အပင်များအတွက်အလင်းတိုးတက်ကြီးပွား LED အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အကောင်းဆုံးမိုးလုံလေလုံနဲ့ LED စက်ရုံအလင်း 1200W တိုးတက်ကြီးပွားခြင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အကောင်းဆုံး Hydroponics 400w COB အလင်းတိုးတက်ကြီးပွား LED အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အကောင်းဆုံးစက်ရုံစျေးဥယျာဉ်များအတွက်အလင်းတိုးတက်ကြီးပွား LED အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အကောင်းဆုံး 640 ဝပ်အလင်း Adjustments ဘားတိုးတက်ကြီးပွား LED အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ငါးမွေးကန်မီးအိမ်ငါး Tank အဏ္ဏဝါ Reef Aquarium အလင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နယူးဒီဇိုင်း Reef သန္တာနဲ့ LED Aquarium အလင်းများ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလင်းတိုးတက်ကြီးပွား LED LED ကို Aquarium အလင်း LED စက်ရုံအလင်းများတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း LED ကို Aquarium Lighting မြင့်မားသောပါဝါအလင်းတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း LED ကို Aquarium အလင်းတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း အလင်း COB တိုးတက်ကြီးပွား LED4COB အလင်းတိုးတက်ကြီးပွား LED
မူပိုင်ခွင့်© 2019 Shenzhen Phlizon Technology Co.,Ltd. All rights reserved ။ မှပံ့ပိုးသည်